अमेरिका र इरानबीच तनाव बढ्दा दक्षिण एसियामा कस्तो प्रभाव ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अमेरिका र इरानबीच तनाव बढ्दा दक्षिण एसियामा कस्तो प्रभाव ?
पुस २० गते, २०७६ - १२:३९
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाद्वारा इरानका जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या गरेसँगै इरान र अमेरिकाबीच तनाव ह्वात्तै बढेको छ । यस्तोमा यसको असर विश्वका बाँकी देशमाथि पनि देखिन थालेको छ । अमेरिका र इरानबीचको तनावको असर दक्षिणी एशियाली देशमा पनि देखिन थालेकाे हाे । कारण दक्षिण एसियाली देश केहि हदसम्म मध्य पूर्वी एशियासँग निर्भर छ ।
यदि यस क्षेत्रमा तनाब बढ्यो भने यसको असर तेल आयातमा देखिनेछ । जसको कारण दक्षिण एशियाका देशहरुमा सिधा प्रभाव पर्नेछ । हामीले अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो तनाबले दक्षिण एसियामा पार्ने प्रभावलाई केलाएका छौं ।
विकासको गतिमा नै असर
भारतीय सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतले आफुँलाई आवश्यक पर्ने कच्चा तेलको ८४ प्रतिशत तेल इरानबाट आयात गर्दछ । यस प्रकार भारतमा आयात भएको तेल नै दक्षिण एसियाका अन्य देशमा वितरण हुन्छ । नेपाल पनि तेलमा भारतसँग निर्भर छ । यदि अमेरिका र इरानका बीच तनाव यसै गरि बढिरहेको खण्डमा त्यसको असर तेलको आयात र मुल्यमा देखिनेछ । जसको सिधा प्रभाव पुरै दक्षिण एसियाकाे अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।
अमेरिका र इरानबीचको तनाव विकसित भएर युद्धको रुप लियो भने तेलको आयातमा पुरै बन्द पनि हुनसक्नेछ । या तेलको मुल्य आकाशिन सक्नेछ । यसको सिधा प्रभाव दक्षिण एसियाभर उपभोग्य वस्तुको मुल्य बढ्ने् र दक्षिण एसियाभर विकासका कार्यक्रम नै प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । विकासका गतिविधिमा असर परेसँगै यसको सिधा प्रभाव अर्थव्यवस्थामाथि नै पर्नेछ ।
वित्तिय घाटा बढ्न सक्छ
अमेरिका र इरानबीच तनाब जारी रहे, तेलको मुल्यमा क्रमशः बढोत्तरी हुनेछ । यसको परिणाम तेलको लागि ज्यादा मुल्य तिर्नुपर्नेछ । जसको कारण सरकारको वित्तिय घाटा बढ्न सक्नेछ । जनाइएअनुसार दक्षिण एसियामा तेल आयात गर्न इरान नै सबैभन्दा सजिलो विकल्प हो । भारतको लागि त तेलको मुख्य इरान तत्कालै निर्विकल्प देश हो ।
भारतमै तेलको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो
भारतीय सरकारी तथ्यांक अनुसार भारतले गएको मार्चसम्म इरानबाहेकका देशबाट जम्मा १० प्रतिशत तेल आयात गरेको थियो । जब इरानले अमेरिकी ड्रोनमाथि आक्रमण गर्यो त्यससमयदेखि दुई देशबीच तनाब उच्च छ । जसको सिधा प्रभाव तेल बजारमा देखिएको छ । सामान्य तनाब बढेसँगै त्यसको सिधा प्रभावको रुपमा भारतमा ८ देखि १० प्रतिशत मूल्यमा बढोत्तरी आएको थियो ।
अहिले भारतको साथमा तत्काल प्रयोग गर्नको लागि रिजर्बको रुपमा ३.९१ करोड बैरल तेल मौजुदा छ । तर त्यो तेलले जम्मा ९.५ दिनसम्म मात्रै पुग्छ । जनाइएअनुसार चीनले करिब ५५ करोड बैरल तेलको भण्डार गरेको छ । अमेरिकाले ६४.५ करोड ब्यारेल तेल भण्डार गरि सुरक्षित राखेको छ ।
तेलको मूल्य बृद्धिसँगै महंगाई बढ्ने
यदि इरानबाट भारतलगायतका दक्षिण एसियाली देशमा तेलको आयातमा कमी आएको खण्डमा त्यसको सिधा असर नागरिकको दैनिकीमाथि हुनेछ । तेलको आयातमा कमी आएसँगै तेलको मुल्यमा पनि बढोत्तरी हुनेछ । जसको परिणाम दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्यमा पर्नेछ । जसको सिधा प्रभाव दक्षिण एसियाभर महंगाई बढ्नेछ ।
क्रमश: दक्षिण एसियाली देशहरुकाे अर्थव्यवस्था जटिल हुन पुग्नेछ । आक्रामक रुपमा अगाडि बढिरहेको भारतीय अर्थव्यवस्थामा ठूलो धक्का लाग्नेछ । पुरै दक्षिण एशियाभर महंगाई बढेसँगै बेरोजगारीको संख्या पनि बढ्नेछ । जसको प्रभाव बैंकिङ्गलगायतका क्षेत्रमा तुरुन्तै देखिनेछ ।
हवाईको भाडादर बढ्न सक्छ
दक्षिण एसियाली देशहरुले मूख्यतः युरोपियन देश जानको लागि इरानी हवाई क्षेत्रको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । अमेरिका र इरानबीचको तनाब बढेसँगै उनिहरुको लागि सो क्षेत्र जोखिमपूर्ण हुनेछ । जसको कारण दक्षिण एसियाली देशहरुले आफ्नो हवाई बाटो नै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यसअघि पनि जुन २०१९ मा अमेरिका र इरानबीच तनाब बढ्दै गर्दा दक्षिण एसियाली देशहरुले आफ्नो हवाइ उडानकाे बाटो परिर्वतन गरेका थिए । जसको सिधा प्रभाव हवाई भाडामा परेको थियो ।
पुस २० गते, २०७६ - १२:३९ मा प्रकाशित